Taliska AMISOM oo sheegay in Ciidamada Sierra Leone ay ka soo degeen Magaalada Wajeer – idalenews.com
Taliska AMISOM ayaa sheegay in ciidamada ka socda dalka Sierra Leone ay ka soo dageen magaalada Wajeer ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya, halkaasoo lagu wado in safar dhinaca dhulka ay xuduuda kaga soo tallaabaan.
Afhayeenka Ciidamada AMISOM Col. Cali Aadan Xumad ayaa sheegay in Ciidamada Sierra Leone oo gaaraya ilaa 200-askari ay soo gaareen Wajeer, isagoo xusay inay ka qeyb galayaan howl galka AMISOM ee Jubooyinka
“Waxay ka soo dageen Wajeer, waxaa lagu wadaa howl galka AMISOM inay ka qeyb qaataan, Jubooyinka ayay ka howl galayaan oo Ciidamada Kenya ay joogaan, iminka inta soo gaartay waa qeybtii u horeysay”ayuu yiri Col. Xumad.
Sidoo kale Afhayeenka AMISOM ayaa tilmaamay in ay bishan soo dhameystirmayaan inta kale ee ka hartay ciidamada, isagoo cadeeyay inay xuduuda u dhaxeysa Kenya iyo Soomaaliya ka soo gudbi doonaan sida uu yiri.
Dhinaca kale Afhayeenka AMISOM ayaa sheegay in ka bixitaanka Ciidamada Itoobiya ay tahay mid saameyn ku ah mas’uuliyada dowladda, inkastoo uu xusay inay socdaan wada hadalo ku aadan sidii meelaha ay ka baxayaan ay ku wareejiyaan AMISOM.
“Bixitaanka Itoobiya waa arrin saameyneysa mas’uuliyada dowladda, wada xaajood ayaa socda, meelo ay ka baxeen waa jiraan, wada hadalada wixii ka soo baxa waxay noqon doonaan in AMISOM ay buuxiso kaalinta nabadgelyada iyo meelaha ay ka baxayaan”ayuu yiri Col. Cali Aadan Xumad.
Ciidamada ka socda Sierra Leone ayaa noqonaya dalkii shanaad oo socda Midowga Afrika oo ka qeyb qaadanaya howl galka AMISOM oo haatan lagu sii ballaariyay Gobolada dalka Soomaaliya.